गोरखाको इतिहाँस र प्रगती यस्तो छ ! «
गोरखाको इतिहाँस र प्रगती यस्तो छ !
प्रकाशित मिति : २८ बैशाख २०७६, शनिबार २०:५२
धरान लाहुरेहरुको शहर भनेर परिचित हँुदै आएको छ । धरानको विकासमा लाहुरेहरुको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । कही न कहीँ आर्थिक विकास होस् या सामाजिक विकासमा धराने लाहुरेहरुको नाम जोडिएको नै हुन्छ ।
मूलत तः लाहुरे भन्ने वितिकै ब्रिटिस गोर्खा लाहुरे सिंगापुरे लाहुरे र इण्डियन लाहुरेहरु धरानमा अग्रस्थानमा आउँछन् । वीर गोर्खालीको नामले विश्वभर नै लाहुरेहरुले नेपाललाई चिनाएका पनि छन् ।
वीर गोर्खालीको देश नेपाल भनेर हामी नेपालीले शीर उचो पनि बनाएका छौं । तिनै वीर गोर्खाली जो भारत, बेलायतसम्म पुगेर आफ्नो ज्यानलाई समेत जोखिममा राखेर लडे । आज तिनै वीर गोर्खालीहरु धरानको कुनै न कुनै सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको पाइन्छ ।
अर्काको देशमा दुःख कष्ट सहेर गरेको केही अथक परिश्रम र प्रयासलाई भूपू गोर्खालीहरुले धरानमा सहकारीको माध्यमबाट पनि यहाँका धरानमा बसोबास गर्नेहरुको आर्थिक जीवन स्तरमा सुधार ल्यानको लागि सहकारी जागरणमा लागेका छन् । समाजमा रहेका हरेक क्षत्रेबाट पछाडी पारिएको वर्गलाई लक्षित गरेर धरान २ स्थित भानुचौकमा गोरखा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सञ्चालनमा रहेको छ ।
भूपू गोरखाहरु संस्थापक भएर सो सहकारी सञ्चालित छन् भने त्यहाँ अहिले सेयर सदस्य भने भूपू गोरखादेखि लिएर सर्वसाधारण धरानेहरुको समेत हिस्सा रहेको छ । अर्थात् सबैको सहकारी गोरखा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड भएको छ ।
संस्थाको संक्षिप्त इतिहाँस
ब्रिटिस र इण्डियाका गोरखा भूपू सैनिकहरुले गोरखा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड स्थापना गरेका हुन् । सुरुवातमा तदर्थ समिती गठन भई यो संस्था सञ्चालन गरिएको थियो । वि.सं. २०५७ साल माघ १० गते कृष्ण राज लिम्बूको संयोजकत्वमा २२ सदस्यीय तदर्थ समिती गठन भई सो सहकारीले सहकारी ऐन अनुसार जानको लागि सम्पूर्ण योजना, कार्यविधीहरु तयार पारेर अघि बढ्यो ।
सोही समितीको पहलमा सहकारी ऐन २०४८ मुताविक २०५८ साल बैसाख ३० गते विधीवत रुपमा दर्ता भएको हो । जेठ १ गतेबाट सहकारीले कारोबार सुरु गरेको थियो । तत्कालिन धरान नगरपालिकाका मेयर मनोज कुमार मेन्याङ्बोले २०५८ साल साउन १९ गते समुद्घाटन सहित प्रारम्भिक साधारण सभा पनि सम्पन्न गरेर संस्थालाई नेतृत्व प्रदान गर्नको लागि सभाबाट चुनावद्वारा कृष्णराज लिम्बूको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय समिती गठन गरिएको थियो ।
लिम्बूको कार्यकालमा २०५८ साल साउन १९ गतेदेखि २०६२ साल भदौ २६ गते अर्थात् ४ वर्ष १ महिना ७ दिनसम्म रह्यो । तत्कालिन अध्यक्ष कृष्णराज लिम्बू सस्ंथापक अध्यक्ष भएर संस्थालाई निरन्तर निरन्तर प्रगतिको पथमा लैजान सफल भयो ।
त्यसपछि संस्थाले नेतृत्व परिवर्तन गर्दै साधारण सभाद्वारा कुल बहादुर राईको नेतृत्वमा २०६२ साल भदौ २६ गतेदेखि २०६४ साल असोज ५ गतेसम्म अर्थात् २ वर्ष ९ दिनसम्म राईले दोश्रो अध्यक्ष भएर नेतृत्व प्रदान गरेको संस्थाको इतिहासले दखाउँछ । २०६४ असोज ५ गतदेखि २०७३ असोज ६ गतेसम्म गजेन्द्रबहादुर इश्वो लिम्बूले ९ वर्ष एक दिनसम्म संस्थाको नेतृत्व प्रदान गरे ।
त्यसैगरी २०७३ साल असोज ७ गतेदेखि भने हालसम्म पनि मानबहादुर राई गोरखा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको अध्यक्ष भएर कार्यरत रहेका छन् । यसरी संस्था अब यही वैशाख ३० गते १८ वर्ष पूरा गरी १९ औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । संस्थाले वार्षिक उत्सव भव्य रुपमा मनाउने पनि तयारी गरेको छ ।
संस्थाले हालसम्म गरेको कारोबार र आर्थिक प्रगती
संस्था स्थापनाकालको प्रथम साधारण सभामा प्रस्तुत आर्थिक कार्य प्रतिवेदन अनुसार संस्थापक सेयर सदस्य लगायत अन्य सेयर सदस्यहरु गरि जम्मा २ सय ५४ जना थिए । स्थापना कालमा संस्थाले ५ करोडसम्म सयेर सहकारी नीति अनुसार संकलन गर्न सक्ने थियो ।
त्यसैले संस्थाले २ करोड ५० लाखको आह्वान ग¥यो । संस्थाले सुरुमा गरेको चुक्ता सेयर पूँजी २२ लाख ८८ हजारबाट सुरु गरेको हो । कुल सम्पत्ती तथा जायजेथा जम्मा ५० लाख ९ हजार ४ सय ७७ रुपैयाँ ८२ पैसा रहेको थियो भने प्रत्येक आर्थिक वर्षहरुमा संस्थाले गरेको प्रगतिले हालसम्म आइपुग्दा सेयर सदस्य संख्या २ हजार ३ पु¥याएको छ ।
त्यसैगरि सेयर पूँजी ३ करोड ७० लाख ९५ हजार र संस्थाको कोषमा ३ करोड ५१ लाख ४३ हजार १ सय ९ रुपैयाँ ५ पैसा रहेको छ । साथै संस्थाले निक्षेप तिर्नुपर्ने हिसाब अन्य दायित्वहरुमा २२ करोड, १५ लाख १५ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ ६२ पैसा छ । नाफा नोक्सान समायोजन १ करोड ७३ लाख ७४ हजार ३ यि ८४ रुपैयाँ ४ पैसा देखिन्छ । सस्थाको कुल सम्पत्ती तथा जायजेथा भने ३० करोड ९८ लाख २८ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ ७१ पैसा छ ।
सयेर सदस्यलाई लाभांश
गोरखा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले पहिलो अािर्थक वर्षमा नै मुनाफा कमाउन सफल बन्यो । संस्थाले सहकारी ऐन अनुसार र बिनियममा व्यवस्था भए अनुसार सेयर सदस्यलाई १५ प्रतिशतसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको साधारण सभाबाट लाभांश समेत वितरण गर्दै आएको छ ।
आफ्ना सेयर सदस्यहरुलाई मुनाफा भएको आधारले स्थापनाकालदेखि नै लाभांश वितरण गर्दै आएको हो । साथै सेयर सदस्यहरुलाई छिटो छरितो र सुविधाजनक ढंगबाट सेवा सुविधा प्रवाह गरेर सहकारीको जागरणको मूल प्रवाहमा सहभागी गराउँदै आएको छ ।
प्रंशसा तथा सम्मान
धरानमा लगभग ८५ वटा सहकारी सस्थाहरु रहेका छन् । ती मध्ये ६० वटा जती सक्रिय छन् । अरु प्रायः संस्थागत हुन सकेको छैनन् अर्थात् झोलामा नै सीमित रहेका छन् । धरानका सहकारी मध्ये स्थापनाकालदेखि नै गोरखा बचत तथा ऋण सहकारी सस्था लिमिटेड उत्कृष्ट सहकारी भएर सम्मानित र प्रशंसा समेत पाएको संस्था हो ।
२०६९ साल चैत १२ गते ५६ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा सहकारी संघ लिमिटेड सुनसरी जिल्ला समितीले धरानको उत्कृष्ट सहकारी संस्थाको रुपमा सम्मान गर्दै प्रशंसा समेत गरेको थियो ।
त्यसैगरी २०७० साल मंसीर २८ गते आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानले दोश्रो राष्ट्रिय कर दिवस २०७० को अवसरमा आर्थिक वर्ष २०६८।६९ मा कर कार्यालयमा दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरुमध्ये सबैभन्दा वढी आयकर बुझाएकोमा सम्मान समेत गरेको थियो । २०७५ साल पुष २१ र २२ गते राष्ट्रिय सहकारी बैंकको १५ औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा शाखा स्तरीय आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को उत्कृष्ट कारोबार गरेकामा समेत प्रसंशा पत्रले सम्मान भएको छ ।